Fitaovana fandokoana SAI: Ny fandaharana tsara indrindra ho an'ny mpanao sary? | Famoronana an-tserasera
Misy karazana rindrambaiko isan-karazany amin'ny fiasa eo amin'ny sehatry ny fanoharana, saingy tsy izy rehetra no manolotra fampiasa mitovy na natao ho an'ny karazana asa mitovy. Lojika ao anatin'ireto solony ireto no ahitantsika ny Adobe Photoshop sy ny rahalahiny Illustrator fa androany dia tsy te-hijanona ao amin'ny trano Adobe aho ary hanokana ity lahatsoratra ity hiresaka momba ny programa Japoney iray tena tsara sy matanjaka, noho ny neninay, tsy novaina tato ho ato, na dia tsy noho Ity aza dia tsy iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpanao sary sy mpanao hosodoko nomerika.
Avy amin'ny Japoney ny Paint Tool SAI ary azo ampiasaina amin'ny karazan'asa rehetra manomboka amin'ny sary amin'ny tantara an-tsary ka hatramin'ny sary azo zahana. Ity ve ny lozisialy tsara indrindra ho an'ny sary sy mpanakanto sary? Raha tsy ny tsara indrindra, eny noho ny safidy hafa tokony ho fantatrao.
Ny interface SAI dia maivana tokoa, izay ahafahantsika manomboka ny fampiharana ao anatin'ny segondra vitsy monja ary hiasa miaraka aminy tsara sy haingana. Izy io koa dia ahafahantsika miasa miaraka amina antontan-taratasy sy rakitra marobe miaraka, mametraka azy ireo ho toy ny tontonana mitsingevana mifanaraka amin'ny filantsika.
Ny fahafahan'ny fanodikodinana sy ny asa dia tsy misy farany na dia eny aza, natao hiaraha-miasa a tabilao grika. Na dia manome antsika ny fahafaha-miasa amin'ny totozy aza isika, maro amin'ireo toetra mampiavaka azy no very, toy ny mety hifehezana ny tsindry sy ny habe amin'ny kapoka sy ny tadinay.
Ny lamba manao sary dia azo zahana, alefa na ahodina amin'ny alàlan'ny slider azy na dia azontsika atao aza ny manamboatra azy hitsin-dàlana miaraka amin'ny fitendry hahatonga ny fizotrany haingana sy mailamailaka kokoa. Ho fanampin'izany dia mahita fitaovana hampihenana ny topi-maso ny sary ihany koa izahay raha tsy mamadika na manova ny fisie.
Mikasika ny fifangaroan'ny loko dia mahita takelaka mamela antsika izahay mamorona paleta manokana ary tahirizo ao anaty tontonana mifangaro eo anelanelan'ny fotoam-piasanay.
Iray amin'ireo teboka matanjaka indrindra hitako amin'ny fampiharana ilay fitaovana isan-karazany amin'ny sary misy. Anisan'izany ireo loko water, pensilihazo, marika na airbrush izay mamela ny fanaingoana sy fitehirizana haingana sy mora. Izy io koa dia manana fitaovana roa hiasa amin'ny piksela na fitaovana hananganana taolam-paty. Ireo maody roa ireo dia azo alamina mba ho mora tohina amin'ny faneren'ny pensilihazo. Raha ny zavatra niainako niasa tamin'ny fanoharana, ny fitaovam-piasana atolotry ity programa ity dia avo lenta ary ahafahantsika mampifangaro ny lokonay sy ny volon-doko tsy misy ilana fitaovana be loatra ary tsy mila manisy fanitsiana be dia be amin'ny borosinay ( toy ny ohatra mitranga amin'ny Adobe Photoshop). Raha te hampivelatra ny sanganasa azo tanterahina na ny firakotra mando dia tena tsara raha ny hahazo ny valiny mendrika no tadiavintsika ary tsy manana ny fotoana rehetra tadiavintsika isika.
Na dia, araka ny lazainay, ny fanavaozana farany nataony dia efa ela lasa izay, dia manana fomba fiasa ahafahantsika manazava amin'ny fisarahana tsirairay ary koa manangona azy ireo ary koa mamorona sarontava opacity amin'ny fampifandraisana azy ireo fotsiny. Amin'izany fomba izany dia haingana dia haingana ny asa alokaloka sy fandokoana. Ho fanampin'izany, ahafahantsika manova ny malama amin'ny kapoka ihany koa isika ary mitaona ny fihetsiky ny pensilihazo sy ny fanerena hanova ny tranga misy ao amin'ilay sary.
Mikasika ireo fisafidianana, SAI dia manolotra fitaovana mahazatra toy ny kianja fisafidianana tsotra, ny lasso na ny famosaviana majika. Azontsika atao koa ny mampiasa fitaovana fisafidianana borosy izay azo namboarina tanteraka toy ny borosy. Izy rehetra dia azo alamina mba hananana antialiasing.
Tokony hotadidintsika fa ity programa ity dia namboarina sy novolavolaina ho an'ny fanaovana sary sy hosodoko, noho izany dia misy fitaovana sasany izay tsy misy toy ny sosona an-tsoratra, gradien na fitaovana hampidirana endrika. Ireo singa rehetra ireo dia matetika tafiditra ao aoriana ary ao anaty programa hafa, raha vantany vao niasa tamin'ny sarinay avy amin'ny SAI izahay.
Mikasika ireo safidy fampirantiana dia tokony ho fantatrao fa amin'ny faritra mangarahara ao SAI dia fotsy, ka rehefa manokatra ny tetikasanao amin'ny rindrambaiko hafa ianao dia tsy hitovy ny fampisehoana ireo faritra mangarahara ireo.
Na dia tsy manome safidy fanontana aza izy io, dia manolotra ny fahafaha-mitahiry ireo tetikasantsika amin'ny fanitarana fantatry ny rehetra izay azo zahana amin'ny rindrambaiko rehetra toy ny .PSD, .BMP na .JPG ho fanampin'ny endrika zanatany .SAI.
Raha ny lojika, satria tsy mifantoka amin'ny fanodinkodinana sary na fanovana sary, ny fanitsiana asehony dia ny an'ny Brightness - Contrast and Tone - saturation, ka ny ambiny amin'ireo safidy izay miseho ohatra amin'ny Photoshop dia tsy tohanana. Na izany na tsy izany, ny mifanentana be amin'ny rindrambaiko hafa dia midika fa tsy misy dikany io izay azo vahana haingana ary tsy misy fanasarotana be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Fitaovana fandokoana SAI: Ny fandaharana tsara indrindra ho an'ny mpanao sary?
Javi humanbeing dia hoy izy:
Efa ela aho no nanana an'io ary programa mahafinaritra amin'ny fanaovana sary! :)
Valiny ho an'i Javi Humanbeing
Susanna Martinez dia hoy izy:
Ahoana no ahafahako misintona azy maimaim-poana?
Valiny tamin'i Susanna Martínez
Tsy maintsy andramantsika izany, toa mitovy amin'ny ArtRage, raha fintinina ... andramana!
Ho an'ireo masoivoho sy mpanao sary rehetra mitady hanitatra ny ekipany na, manafaka azy ireo amin'ny volana Janoary, manasa anao aho hitsidika ny workana.com/agencias :) Vahaolana ho an'ireo masoivoho sy mpamokatra!